bagan Archives - LODGGY
ပုဂံလဲ အခုအချိန်ပြန်ဖွင့်ပြီဆိုတော့ ခရီးတွေသွားဖို့ ပြန်ပြီး စဥ်းစားနေကြပြီပေါ့… ကိုယ်တွေလဲ ဘယ်ရက်လေးတွေ သွားရမလဲ ချောင်းနေတာနော်….. 🙄🙄 သွားကိုသွားရမှဆိုရင်တော့ စဥ်းစားရမှာ ဘယ်လိုသွားမလဲ ဘယ်မှာတည်းရမလဲ? တည်းတဲ့အခါလဲ အဆင်ပြေပြေနဲ့ သက်သက်သာလဲ ဖြစ်၊ အားလုံးအဆင်ပြေတဲ့နေရာဆိုတာ ဘယ်နေရာဖြစ်မလဲ? ‌ညောင်ဦးမြို့ဘက်လား? ပုဂံမြို့ဟောင်းဘက်လား? ပုဂံမြို့သစ်ဘက်လား? ဘုရားတွေနဲ့ရော နီးရဲ့လား🤔၊ ပုဂံနဲ့ညောင်ဦးနဲ့ဝေးလား🤔။ စသည်ဖြင့် စဥ်းစားကြရမှာပေါ့၊ ဒီမေးခွန်းဖြေဖို့ အရင်ကိုယ့်ဘာကိုယ်မေးရမဲ့မေးခွန်းတွေက…
Best Infinity Pools in Myanmar 2020
Infinity Pool လို့ပြောလိုက်တာနဲ့ မျက်စိထဲမှာ အဆုံးအစမဲ့ ရေပြင်ကြီးကိုလှမ်းမြင်မိမှာပါ။ အခုဒီ list ထဲကဟိုတယ်တွေက ဆုံးအစမဲ့ရေပြင်ရယ်၊ နောက်ခံအလှတရားတွေ – တောင်တန်း၊ ပင်လယ်ပြင်၊ မြို့ပြ စတဲ့အလှတရားတွေ အပြည့်အဝ ခံစားရမှာပါ။ ဒီထဲက အကြိုက်ဆုံးဘယ်ဟိုတယ်လဲ ? ရန်ကုန် Rosewood Yangon View this post on Instagram A…
ပုဂံကို (နိုင်ငံတစ်ခုအသွင်) ခရစ်နှစ် ၁၀၇ ခုနှစ်မှာ စတင်ထူထောင်ခဲ့တာဖြစ်လို့ ခုဆို နှစ်ပေါင်း ၁၉၀၀ ကျော်ရှိပြီဖြစ်ပါတယ်။ အနော်ရထာမင်းကြီးရဲ့ ပထမမြန်မာနိုင်ငံတော်ကို အေဒီ ၁၀၄၄ – ၁၀၇၇ တည်ထောင်စဉ်က ပုဂံဟာ သာသနာနဲ့ပတ်သတ်ပြီးအရှိန်ကောင်းခဲ့တဲ့ ဒေသတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ၁၂ ရာစုကတော့ ပုဂံရဲ့ အကြီးကျယ်အခမ်းနားဆုံးအချိန်တွေပါပဲ။ သဗ္ဗညုလို၊ ရွှေဂူကြီးလို၊ ဓမ္မရံကြီးလို၊ စူဠာမဏိလို၊ ကန်တော့ ပလ္လင်လို…
E-Biking in Bagan is the ultimate way to explore Bagan. You not only have the freedom and the mobility to explore but also it is alsoagood way to…
ပုဂံ-ပုပ္ပါး ၃ညအိပ် – ၄ရက်ခရီး
ပွင့်လင်းရာသီလဲ ရောက်ပြီ၊ အောက်တိုဘာမှာကလည်း ပိတ်ရက် ၅ရက်ဆက်ထားတယ်ဆိုတော့ ခရီးသွားဖို့ ကြိုစီစဉ်တဲ့သူတွေလဲ ရှိရောပေါ့။ ပုဂံကို ဘုရားဖူးသွားမယ့် သူတွေရော ရှိမလား မသိဘူး။ ဒီလို မိုးအကုန် ဆောင်းအကူး အချိန်တွေမှာ ပုဂံကို တကယ်သွားလို့ ကောင်းတယ်ဆိုတာ ယုံလိုက်ပါ။ ပုဂံကိုသွားတဲ့အခါ လူလဲသက်သာ အဆင်လဲပြေအောင် ဘယ်လိုသွားကြမလဲ ဆိုတာကို lodggy.com ကနေ Tour Guide…
Best Hotel Pools in Bagan, Ancient Burma
As ancient Bagan isacultural heritage of Myanmar, there are many tourists, guests and visitors. There are various hotels in Bagan and according to the price range. Here lodggy.com…
Bagan Umbra Hotel Review
The Place Amidst the temple-scape of Bagan in Myanmar’s near-desert dry zone, Umbra isaconvenient and comfortable respite from the dust and heat. The Space Umbra’s pool area is…
မိုးတွင်းမှာ ခရီးသွားမယ့်သူတွေအတွက် အကောင်းဆုံး နေရာတွေ (ပုဂံ)
မြန်မာပြည် မိုးတွင်းက အားလုံးသိကြတဲ့ အတိုင်းပဲ မိုးများပြီး စိုစွတ်နေတတ်လို့ ခရီးသွားလို့ မကောင်းလှပါဘူး။မိုးတွင်းမှာလည်း ခရီးသွားတဲ့သူ သိပ်မရှိပါဘူး။ ဒီလိုအချိန်မှာ အေးအေးဆေးဆေးလေး ခရီးသွားမယ်ဆိုတဲ့ သူတွေအတွက် ဘယ်လိုနေရာတွေကများ သင့်တော်မလဲ။ မြန်မာနိုင်ငံ အလယ်ပိုင်းက ရှေးဟောင်း မြို့တော် ပုဂံကတော့ မိုးရာသီခရီးသွားလို့ အကောင်းဆုံး နေရာတွေထဲက တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဘာလို့ သွားသင့်တယ်ဆိုတဲ့ အချက်လေးတွေနဲ့ ဘာတွေ သတိထားရမလဲ…
9 facts about Shwezigon Pagoda
ရွှေစည်းခုံ စေတီတော် အကြောင်း သိကောင်းစရာများ ၁။ရွှေစည်းခုံစေတီဟာ အနော်ရထာမင်း တည်ထားကိုးကွယ်ခဲ့တဲ့ စွယ်တော်မြတ် လေးဆူထဲက တစ်ဆူဖြစ်ပါတယ်။ ၂။အနော်ရထာမင်း စတင်တည်ထားခဲ့ပေမယ့် အပြီးသတ်ခဲ့သူက ကျန်စစ်သားမင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ၃။ ပုဂံဘုရား ရာဇဝင်များအရ “တန်ခိုးမှာ ရွှေစည်းခုံ” ရယ်လို့ စာတင်ရအောင်ပဲ တန်ခိုးကြီးတယ်လို့ သိရပါတယ်။ ၄။ စေတီတော်ကြီးကို ကုန်းမြင့်မှာ တည်ထားတယ်လို့ ထင်ရပေမယ့် တကယ်တမ်းတော့…
Amata Bagan Boutique House Review
Another lodging contender in Myanmar’s most popular tourist destination, Amata Bagan Boutique House boastsacomfortable pool area, classy rooms, well arranged trees & plants and one of the few fully…